Toogasho lagu dilay dad rayid ah oo Muqdisho ka dhacday | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Toogasho lagu dilay dad rayid ah oo Muqdisho ka dhacday
Toogasho lagu dilay dad rayid ah oo Muqdisho ka dhacday
written by Admin 19/07/2020
Ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhimatay tira kalana way ku dhaawacantay kadib markii nin hubeysay uu rasaas ku furay dad ku sugnaa guri ku yaalla degmada Warta nabadda ee magaalada Muqdisho.
Ila-wareedyo ayaa Shabakada Warbaahinta Warsan u sheegay nin hubeysan uu soo galay guri dadkaasi ay ku sugnaayeen oo sida la sheegay “Mingis” lagu garaaco kadibna uu toogtay dadkii ku sugnaa
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya cidda uu ahaa shakhsiga weeraray dadka gurigaasi ku sugnaa, walow aan illaa iyo hadda loo haayn xaqiiqa rasmi ah .
Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa gaaray halka uu guriga uu dhibka ka dhacay, waxayna billaabeen baaritaanno. Sida Warsan News ay u sheegeen dadka deegaanka.
Maamulka degmada Warta-nabada ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay nin hubeysan oo rasaas ku furay guri mingiska lagu tumo oo ku yaal degmadaas.
Guddoomiyaha degmada Warta-nabada Seyban Xaabseey oo tagtay guriga dhacdada ay ka dhacday ayaa sheegtay in nin hubeysan oo aan la garaneyn wuxuu yahay rasaas uu ku furay guri mingiska lagu tumo oo ku yaalo xaafadda Waaxda koowaad Janaraal daa’uud ee degmada War-ta nabada,halkaasina ku dhibaateeyay dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
“ Dadkaas 8-Qof baa dhaawac ah iyo Qof dhimasho ah, baaris ayaa socota, annaga kan maamul ahaan iyo Boolis waxaan la wareegnay gurigii mashaqada ay ka dhacday, dadkii dhibaatada gaartayna waxaan geynayo cisbitaalo, ayay tiri guddoomiye Seynab Xaabseey.
Lama oga sababta uu ninkan hubeysan arrintaan u sameeyay,balse waxaa dhacdadaan baaritaan ku haya ciidanka Booliska.
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa War kasoo saaray weerarkii lagu qaaday Guri mingiska lagu tumo oo ku yaalla agagaarka Iskoolka 15-May ee Degmada Warta-nabada ee Gobolka Banaadir.
Qoraa kasoo baxay Taliska Booliska ayaa waxaa lagu sheegay in Nin ku labisnaa deriska Ciidanka dowladda uu rasaas xoogan mar qura ku furay Guri ay ku sugnaayeen dad shacab ah laguna tumaayay xiligaas waxa loogu yeero mingiska.
Eedeysanaha falkaas geystay ayaa waxaa Magacaabiisa lagu sheegay Cabdikariim Dheere, wuxuuna horay uga tirsanaan jiray Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed, isagoona goobta ka baxsaday weerarka kadib.
“Abaare 12:30 duhurnimo, ayaa nin ku labisan labiska Ciidanka, ayaa rasaaseeyay dad ku sugnaa Goob Mingiska lagu tumo iyo Xerada Barakacayaasha ee Camp 15May oo ku taala agagaarka iskoolka 15May ee Degmada Wartanabada” ayaa lagu yiri Qoraalka Taliska Booliska.
Weerarka ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab, isla markaana waxaa halkaas ku dhintay hal Nin oo lagu Magacaabi jiray Saleebaan Maxamed Mahadi, halka 9 qof kalena ay ku dhaawacmeen.
“Eedeysanaha oo goobta ka baxsaday ayeey Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ku raad-joogaan si gacanta loogu Soo dhigo, loona maxkamadeeyo” ayaa lagu soo gaba-gabeeyay Qoraalka uu soo saaray Taliska Ciidanka Booliska dowladda.
Guddoomiyaha Degmada Warta-nabadda ee Gobolka Banaadir Seynab Xaabsey oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in Maamulka Degmada uu la wareegay Guriga falka uu ka dhacay, ayna wadaan baaritaano ku aadan sidii uu u dhacay weerarkaas
dhanka kale iska horimaad hubeysan oo u dhexmaray ciidamo ka wada tirsan DF ayaa caawa ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya in iska horimaadku bilowday ka dib markii ay foodda isdareen ciidamo ka tirsan milateriga oo gaari ku watay Qaad iyo Boolis ku sugnaa bar kontrol.
“Milateriga Qaadka ku watay gaariga waxay diideen in la baaro, waxayna isku dayeen iney xoog ku jiiraan barta kontrol ee ciidamada amaanku joogeen ka diba israsaaseyn ayaa ka dhex bilaabatay goobtana waa laga kala cararay” ayuu yiri qof goob jooge ah oo halkaas ku sugnaa.
Ciidamadii milateriga ee gaariga ku watay qaadka ayaa la sheegay iney dib uga laabteen kontrolka booliska ee ay doonayeen iney xoogga ku maraan.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in askari ka tirsanaa ciidanka milateriga uu ku dhintay iska horimaadkan, halka askari kale oo booliska ka tirsanaa uu dhaawac soo gaaray.
Maamulka degmada Yaaqshiid iyo saraakiisha laamaha amaanka ayaan ka hadlin dhacdadan oo qeyb ka ah falalka amni daro ee ciidamada dowladu ka geystaan magaalada Muqdisho.
Toogasho lagu dilay dad rayid ah oo Muqdisho ka dhacday was last modified: July 19th, 2020 by Admin
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb
Dabeylo ku dhufatay gobolka Louisiana & Madaxweyne Trump oo booqanaya (Sawirro)
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedin doona kulanka Golaha Shacabka ee Berri
Dhageyso+Sawiro:-Ciidamada militariga soomaliya qeybta lixdanaad iyo ciidanka amisom oo is garab saneya waxaa ay baydhabo ka wadeen gaadiid xmuul ah oo kudhawaad sanad ku xayir naa magaalada baydhabo
Akhris+Sawiro:-Ra’iisul Wasaare Khayre oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Kadib Socdaalkii Shaqo Ee Washington
Daawo Video Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kulan kula qaatay magaalada Muqdisho xildhibaano taageersan sirta